Governemanta Ntsay Christian : Tsy mahavaha ny olan’ny vahoaka -
AccueilSongandinaGovernemanta Ntsay Christian : Tsy mahavaha ny olan’ny vahoaka
Governemanta Ntsay Christian : Tsy mahavaha ny olan’ny vahoaka
14/09/2018 admintriatra Songandina 0
Hatramin’ny nitsanganan’ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, ny 11 jona 2018 noho makanty, mbola tsy nahavaha ny olan’ny mponina izy ireo.
Ankehitriny mantsy, manomboka midangana izay tsy izy indray ny vidim-bary. Nahitana fiakarany 50 Ar hatramin’ny 100 Ar ny kapoaka sy ny kilaon’ny vary eny an-tsena. Ny mahagaga mantsy dia ny vary vokatra eto an-toerana indray no manatombo ny vidiny raha mihoatra amin’ny vary hafarana avy any ivelany. Izany hoe, raha tany amin’ny 1 400 Ar hatramin’ny 1 500 Ar ny kilaon’ny vary tamin’ilay governemanta notarihin’ny praiminisitra teo aloha, Solonandrasana Olivier amin’izao fotoana izao, efa tafakatra hatrany amin’ny 1 925 Ar ny kilao eny an-tsena. Efa mananika ny 2 000 Ar indray ny kilaon’ny foto-tsakafon’ny malagasy, amin’izao fotoana izao…
Tsy vitan’izay fa voakitika mihitsy ny sosialim-bahoaka. Anisan’izany ny fiakaran’ny vidin-tsolika ny talata 11 septambra teo. Nahitana fiakarana 50 Ar ihany koa ny vidin’ny solika ka ny lasantsy lasa 4 150 Ar raha 4 100 Ar izany teo aloha. Ny gazoala niakatra ho 3 500 Ar raha 3 450 Ar izany, ary ny solika fandrehitra lasa 2 580 Ar raha 2.530 Ar izany teo aloha. Ny governemanta teo aloha anefa nahavita nampidina ny vidin’ny solika tany amin’ny voalohan’ny volana avrily 2018.
Anisan’ny tena mampiferotr’aina ny vahoaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa hatrany ambanivohitra rehetra any. Saika hahenoana asan-dahalo, asan-jiolahy sy fanafihana mitam-piadiana ary manginy fotsiny ny fakana an-keriny izay miseho lany eto amin’ny firenena, sns.
Santionany amin’ny tranga misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao ireo. Mbola maro tsy ho voatanisa ny sosialim-bahoaka izay tsy voajerin’ity governemanta Ntsay Christian ity hatramin’ny naha voatendry azy ireo.
Hatreto, hita ary tsapa fa tsy mahavaha velively ny olan’ny vahoaka ity governemanta notakiana tetsy amin’ny Parvis-n’ny 13 Mai ity. Mety mbola variana misesika izay azo tokoa, araka ny hirahiran’ny olona eny an-dalana sy eny rehetra eny angamba aloha ireo mpitantana manomboka any amin’ny praiminisitra ka tsy mitsinjo izay mba ho tombontsoa sy izay mahasoa ny vahoaka.
Fehiny, tsy misy zava-bitan’ity governemanta Ntsay Christian ity ho tombontsoa iombonana eto amin’ny firenena, ary tsy misy voafehiny ny lafiny rehetra eo amin’ny sosialy, izay hiankinan’ny fiainam-bahoaka…
TAFA-PIFIDIANANA : Eliane Bezaza, laharana faha-14
Eliane Bezaza, laharana faha-14 Vehivavy no hitondra fanovana “Mbola tsy nisy vehivavy nitondra teto amin’ ny firenena”, io no nambaran’ny kandidà, Eliane Bezaza ao amin’ ny tranonkalam-pifandraisany. Ambaran’ity kandidà ity ihany koa fa “raha fanovana ...Tohiny
Fanonganam-panjakana : Ampiasain’ny firenen-dehibe Ravalomanana ?
Hery Rajaonarimampianina : « TSY MAHAMAIKA NY FANOVANA GOVERNEMANTA »
Isoanala : Dahalo 17 maty voatifitra avy eny ambony helikoptera